ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးကွတ်ကီးလေး တချပ် - The Lifestyle Myanmar
Home Lifestyle opinion ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးကွတ်ကီးလေး တချပ်
ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးကွတ်ကီးလေး တချပ်
လူတိုင်းနီးပါး ကွတ်ကီးလေးတွေတော့ စားဖူးကြမှာပေါ့နော် ကျွန်တော်လဲ တော်တော်များများ စားဖူးခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် ..စားနေကျ အရသာ မဟုတ်တဲ့ ကွတ်ကီးလေးတချပ်ကို ကျွန်တော်စားခဲ့ရဖူးတယ်ဗျာ… ကျွန်တော့်စာလေး ဆုံးအောင် ဖတ်ကြည့်ပါ ကျွန်တော်စားခဲ့ဖူးတဲ့ ကွတ်ကီးက ဘယ်လိုကွတ်ကီးလဲ ဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉. ၂၀၁၀ ခုနှစ်လောက်ကပါ အဲ့ဒီ အချိန်တုံးက ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Hotel ကြီးတခုမှာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ duty က မနက်လင်းအားကြီး ၂း၀၀နာရီမှ မနက်၁၀း၀၀ထိဖြစ်ပါတယ် တနေ့… ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ပြန်ခါနီး၉း၃၀နာရီလောက်မှာ မုန့်ရောင်းတဲ့ ကောင်တာကနေ ဖုန်းဆက်လာပါတယ် Bread side က တာဝန်အရှိဆုံးလူတယောက်နဲ့ တွေ့ချင်ပါတယ်တဲ့ ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ… ဧည့်သည် complain ဆိုတာ.. ဒါနဲ့…ကျွန်တော်လဲ မုန့်ရောင်းတဲ့ ကောင်တာလေးဆီ ပြေးဆင်းသွားပါတယ်..
Counter ရောက်တော့…. ဆံပင်ကျောလည်လောက်ထိရှည်တဲ့ အသက်၅၀အရွယ် ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ် မုန့်ရောင်းတဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်မလေး(မသန္တာလို့ထင်ပါတယ်)က … ဒီမှာ bakery chef ရောက်လာပါပြီ လို့ ဧည့်သည်ကို ပြောလိုက်ပါတယ်… အဲ့ဒီ ဆံပင်ရှည်နဲ့လူက ကျွန်တော့ဘက်လှည့်ကြည့်ပြီး…. ဒီလိုကွာ ညီလေး…ကိုမနေ့က bread ၂မျိုးဝယ်သွားတယ်…ကိုလဲသတိမထားမိလိုက်ဘူး အိမ်ပေါက်ရောက်လို့ လုံခြုံရေးတွေကစစ်ဆေးတော့ ဒီ bread ၂မျိုးလုံးအောက်ခြေမှာ မှိုတက်နေတာသိတာ…. ဒီလို 5star hotel ကြီးက မှိုတက်တွေ ရောင်းသလားလို့မေးကြတယ် အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်လာတဲ့ အစ်မက ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးရောက်လာပါတယ်တဲ့ အကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်တော့… အေးလေ..သူတို့5star hotel ဖြစ်ပြီးတော့ မှိုတက်တွေရောင်းနေတာ သွားပြန်လဲ လို့ပြောလို့ အကိုပြန်လာတာလို့ကျွန်တော့်ကို ပြောပါတယ်
ကျွန်တော် ဘာမှန်းမသိဘူး ကြောင်နေပါတယ် သူတို့ပြောတာ ဘယ်သူမှန်းလဲမသိဘူး… ဒီအချိန်မှာ ..မုန့်ရောင်းတဲ့ကောင်မလေးက ဒီအကိုက..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဝယ်တော်ပါတဲ့..သူအကျယ်ချူပ်ကျနေချိန်မှာ ဒီအကိုတယောက်ပဲ နေ့စဉ် ဈေးဝယ် ဝင်ထွက်ခွင့်ရတာ လို့ပြောတော့.. ကျွန်တော် အကိုဝယ်သွားတဲ့ bread တွေကိုကြည့်ပါရစေလို့ပြောပြီး bread တွေကိုကြည့်တဲ့အခါ… သူတို့ယူဆနေသလို မှိုဆိုသောအရာမှာ မှိုမဟုတ်ပဲ ဂျုံမှုန့်များဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်
ကျွန်တော်လဲ အဲ့ဒီအကိုကို… အကိုရေ..ဒါမှိုတွေမဟုတ်ပါဘူး ဂျုံတွေပါ ကျွန်တော်တို့ breadတွေ ဖိုထဲထည့်တဲ့အခါ သစ်သားယောင်းမ အကြီးကြီးပေါ်တင်ပြီးမှ ဖိုထဲကို ထည့်ကြပါတယ် Breadနဲ့ သစ်သားယောင်းမ မကပ်နေအောင် ကြားခံအနေနဲ့ ဂျုံဖြူးပြီးထည့်မှ အဆင်ပြေတာပါ ..အဲ့ဒီ ကြားခံဖြူးထားတဲ့ ဂျုံမှုန့်လေးတွေက bread တိုင်းမှာကပ်နေတတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ hotel မှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှ နေ့စဉ်လုပ်ထားတဲ့ up date တွေပါ… ရက်လွန်တွေ ရောင်းခွင့်မရှိပါဘူး ဒီနေ့ရောင်းလို့မကုန်ရင် စွန့်ပစ်ရပါတယ် နောက်နေ့ဆက်ရောင်းခွင့်မရှိပါဘူး အန်တီစုအတွက် အကိုဝယ်သွားခဲ့တဲ့ breadတွေက မှိုတက်တွေမဟုတ်ပါဘူး ယုံယုံကြည်ကြည်စားသုံးပါ ဘာတခုမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် တာဝန်ယူပါတယ် လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှာ..သူ့မျက်နှာကြည်လင်လာပြီး Sorry ညီလေးရာ..အကိုလည်း လုံခြုံရေးတွေပြောတာနဲ့..ထင်သွားတာပါ ဒီအကြောင်းကို..အစ်မကိုလည်းသေသေခြာခြာရှင်းပြလိုက်ပါ့မယ် အစ်မက သူကိုယ်တိုင်လည်းမုန့်လုပ်တတ်တယ်လေ… ညီလေးတို့ဆီက breadတွေ သူအရမ်းကြိုက်လို့ တပါတ် ၂ကြိမ်လောက် အပါတ်တိုင်းဝယ်ခိုင်းနေကျပါ… စိတ်ချညီလေး…အကိုသေချာရှင်းပြလိုက်ပါ့မယ်လို့ပြောပါတယ်…. ဒီအချိန်မှာ….ကျွန်တော်က.. အကို..ညီလေးတခုလောက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့ပြောတော့.. ပြောပါညီလေး… အကို အန်တီစုအတွက်ဝယ်သွားတဲ့ bread တွေကို ဒီနေ့မှစတင်ရောင်းချမယ့် ကျွန်တော်အသစ်လုပ်ထားတဲ့ cheddar cheese breadလေးနဲ့ လဲလှယ်သွားပါလားခင်ဗျာလို့ပြောတော့…
ဟုတ်ပြီ..ညီလေး.. ဝယ်ထားတဲ့ breadတွေလဲယူမယ် အသစ်ရောင်းမယ့် ဒီ bread လေးလဲယူသွားမယ်.. အစ်မက မင်းတို့breadတွေ တစ်လတစ်မျိုး မရိုးအောင် ထုတ်လုပ်နေတာကိုစိတ်ဝင်စားတာလို့ပြောပြီး ကျွန်တော်ပေးတဲ့ cheddar cheese bread လေးကိုပါ ဝယ်သွားပါတယ်….. ဒီလိုနဲ့…တရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့ duty ဝင်ဝင်ချင်း စားပွဲပေါ်မှာ for bakery ဆိုပြီးပုဂံပြားတခုထဲမှာထည့်ထားတာ တခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်… ကျွန်တော်လဲ ဘာ complainလာပြန်ပြီလဲဆိုပြီး ဖွင့်ကြည့်တော့…. Butter cookie လေး တချပ်…. ဒီကွတ်ကီးက ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး ကျွန်တော်တို့sideကလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး ဘာကြောင့် for bakery ဆိုပြီးတပ်ထားရတာလဲ ? နောက်ပြီး တစ်ခုထဲ ?
ကျွန်တော်ပြန်အုပ်ပြီးသိမ်းထားလိုက်တယ် မနက်ပိုင်းလူတွေ လာမှမေးမယ်ပေါ့ ဒါနဲ့ …ကျွန်တော်လဲ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ရင်းမေ့သွားပါတယ် မနက် ၆း၃၀နာရီလောက်မှာ မုန့်ရောင်းဖို့ နေ့စဉ်လာယူနေတဲ့ ကောင်မလေးက… အကို ..မနေ့ကပို့ပေးလိုက်တဲ့ ကွတ်ကီးတွေစားပြီးပြီလား တဲ့ ကျွန်တော်သတိပြန်ရသွားပြီး…အေး..အဲ့ဒါမေးမလို့..ဘာအတွက်လဲဟ.. ဟာ…အကိုကလဲ..အဲ့ဒါ အန်တီစုကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး အကိုတို့အတွက်ပို့ပေးရင်း တောင်းပန်စကား မှာလိုက်တာလေ တဲ့ ဟင်…ဒီတခုပဲကျန်တော့တယ် မနေ့ကပို့ပေးတာ အများကြီး ဘယ်သူတွေစားလိုက်ကြလဲ ..အကိုတို့မစားရဘူးလားတဲ့..
ပြီးတော့..အန်တီစုက သူ သူများပြောတဲ့စကားနဲ့ ကိုယ်တိုင်မကြည့်ရူ့ပဲ မဆင်မခြင် အပြစ်တင်လိုက်မိတဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ ကွတ်ကီးလေးတွေနဲ့ တောင်းပန်တာပါတဲ့ အမှန်က သူ လူကိုယ်တိုင်တောင်းပန်သင့်တာပါတဲ့ တောင်းပန်လို့မရနိုင်တဲ့ အကျယ်ချူပ်အခြေ အနေမို့ ဒီကွတ်ကီးလေးတွေနဲ့ပဲ တောင်းပန်လိုက်တာပါတဲ့ သူ့ရဲ့အဝယ်တော်ကို သေချာမှာလိုက်ပါတယ်….. ကျွန်တော် ဘာပြောရမှန်းမသိတော့… မမျော်လင့်ထားသော…. မမျှော်လင့်ရဲသော….. ဘဝမှာ မကြုံဘူးသော ခံစားမှုတခု…. ဝမ်းနည်းသလိုလို..ဝမ်းသာသလို… အမည်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိသော ခံစားချက်မျိုး ကျွန်တော် ရလိုက်ပါတယ်….
ကျွန်တော်လို..အညတြရ မုန်ဖုတ်သမားလေး…. ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ baker တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်…မြူမှုန်လောက်သာ ရှိသော ကျွန်တော်လိုလူကို……. ဖြူသလား…မည်းသလားတောင်မမြင်ရပဲ စကားတစ်ခွန်းအတွက် တာဝန်ယူရဲတဲ့စိတ် အတ္တ မာန ကင်းစင်ပြီး…မှားတယ်လို့ယူဆပါက..မည်သူ့ကိုမဆို တောင်းပန်ရဲသော…သူရဲကောင်းစိတ် လူလူချင်း လေးစား အခွင့်အရေးတန်းတူထားသောစိတ် အဲဒီအရသာတွေ အပြည့်အဝပါဝင်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားပြီး…ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးပို့ ခဲ့တဲ့ တစ်ခုထဲသာကျန်တော့တဲ့ ကွတ်ကီးလေးကို အရသာရှာဖွေ တစိမ့်စိမ့်ခံစားရင်း…….
ထွဋ်တေဇဖြိုး *ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြန်လည်ရေးဖွဲ့ပါသည်*
Previous articleယခုရောင်းချနေတဲ့ မြေကွက်များအကြောင်း သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံ
Next articleရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း မူလမြေပိုင်ရှင်များထံ ကျပ် ၂၀၀ ဘီလီယံ ထပ်လျော်ပေးမည်
တောင်ကိုရီးယားရှိ မြန်မာများထံမှ ဝမ် သိန်း ၂ ထောင်ကျော် လိမ်သွားသူကို မိပြီ
ကမ္ဘာ့အလှူဒါန အရက်ရောဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာ ၅ နှစ်ဆက်တိုက် ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်